Diatoms: kedu ihe ha bụ, njirimara, bayoloji na ọtụtụ ndị ọzọ | Green Renewables
Portillo nke German | 11/11/2021 12:44 | Gburugburu
N'ime otu algae anyị nwere microalgae nke bụ mmiri na otu cell. N'ime ndị a anyị nwere diatoms. Ha nwere ike ịbụ nke ụdị osisi, ya bụ, nwee ndụ n'efu ma ọ bụ na-etolite ógbè. A na-eji diatoms nwee nkesa nkesa, yabụ anyị nwere ike ịhụ ha n'ụwa niile.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara diatoms, àgwà ha na mkpa ha.
2 Diatom oriri na ọṅụṅụ
3 Mmeputakwa na diatoms
4 Ecology na ifuru
Tinyere ndị ọzọ dị iche iche nke microalgae, ha bụ akụkụ nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke phytoplankton outcrops na okpomọkụ, subtropical, Arctic na Antarctic mmiri. Ebe ha malitere laa azụ n'oge Jurassic, ma taa, ha na-anọchite anya otu n'ime nnukwu ìgwè microalgae mara ihe a kpọrọ mmadụ, nwere ihe karịrị 100.000 ụdị akọwara n'etiti mkpochapụ na mkpochapụ.
N'ihe gbasara gburugburu ebe obibi, ha bụ akụkụ dị mkpa nke ntanetị nri nke ọtụtụ usoro ndu. Sedimenti diatom bụ ihe dị oke mkpa nke ihe ndị na-agbakọba n'elu oke osimiri.
Mgbe usoro ntinye ogologo oge gasịrị, nrụgide nke ihe ndị dị ndụ na ọtụtụ nde afọ, sediments ndị a aghọwo mmanụ nke na-eme ka mmepe mmepe nke mmepeanya anyị ugbu a. N’oge ochie, oké osimiri kpuchiri ógbè ndị dị n’ụwa ugbu a. Ụfọdụ n'ime ebe ndị a ka nwere oghere nke ụwa diatomaceous, nke a na-akpọ ụwa diatomaceous.
Ha bụ eukaryotic na photosynthetic organisms nwere diploid cell ogbo. Ụdị niile nke microalgae ndị a ha bụ otu cell ma nwee ụdị ndụ efu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ha ga-etolite ógbè (spherical), ogologo agbụ, ngalaba, na spirals.
Njirimara bụ isi nke diatoms bụ na ha nwere shei diatom. Diatom frustules bụ ụdị mgbidi cell nke nwere silicon dioxide, nke gbara sel gburugburu n'ụdị dị ka efere Petri ma ọ bụ efere Petri. A na-akpọ akụkụ elu nke capsule a epithelium na akụkụ nke ala ka a na-akpọ nnyefe. Ihe ịchọ mma nke shei ahụ dịgasị iche site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ.
Diatom oriri na ọṅụṅụ
Diatoms bụ ihe ndị dị ndụ fotosynthetic: ha na-eji ìhè (ike anyanwụ) mee ka ha ghọọ ogige organic. Ogige ndị a dị mkpa iji gboo mkpa ndu gị na nke metabolic.
Iji mepụta ogige organic ndị a, Diatom chọrọ nri nriIhe oriri ndị a bụ nitrogen, phosphorus na silicon. Ihe ikpeazụ na-eje ozi dị ka ihe na-egbochi nri n'ihi na ọ dị mkpa maka ịmepụta diatom frustules.
Maka usoro photosynthesis, microorganisms ndị a na-eji pigmenti dị ka chlorophyll na carotenoids.
Chlorophyll bụ pigmenti foto synthetic na-acha akwụkwọ ndụ nke dị na chloroplast. Naanị ụdị abụọ ka a maara na diatoms: chlorophyll a (Chl a) na chlorophyll c (Chl c). Chl na-ekere òkè karịsịa na usoro photosynthesis; N'ụzọ megidere nke ahụ, Chl c bụ ihe eji eme pigmenti. Chl c kachasị na diatoms bụ c1 na c2.
Carotenoids bụ otu pigmenti sitere na ezinụlọ isoprenoid. Na diatoms, ọ dịkarịa ala ụdị carotene asaa ka achọpụtara. Dị ka chlorophyll, ndị a na-enyere diatoms aka weghara ìhè ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ogige nri organic maka mkpụrụ ndụ.
Mmeputakwa na diatoms
Diatoms na-amụpụta mmekọahụ na mmekọahụ site na usoro mitosis na meiosis, n'otu n'otu.
Mkpụrụ ndụ stem ọ bụla na-enweta usoro mitosis. Ngwaahịa nke mitosis, mkpụrụ ndụ ihe nketa, nucleus, na cytoplasm na-emepụtaghachi mkpụrụ ndụ ụmụ nwanyị abụọ yiri sel nne na nna.
Selụ ọ bụla emepụtara ọhụrụ na-ewepụta mpempe akwụkwọ sitere na cell stem dị ka epithelium ya wee guzobe ma ọ bụ mepụta nkwado nke ya. Usoro ọmụmụ a nwere ike ime ugboro 1 ruo 8 n'ime awa 24, dabere na ụdị.
Ebe ọ bụ na sel nwa nwanyị ọ bụla ga-emepụta ego ọhụrụ, ọnụ ọgụgụ nke nwa nwanyị nke na-eketa ego ụlọ n'aka nne na nna ga-adị obere karịa cell nwanne ya. Ka usoro mitosis na-emeghachi, ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ ụmụ nwanyị na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebelata ka ọ bụrụ nke kacha nta.
Mmepụta mkpụrụ ndụ mmekọahụ gụnyere nkewa nke mkpụrụ ndụ diploid (nwere ụdị chromosomes abụọ) n'ime sel haploid. Mkpụrụ ndụ Haploid na-ebu ọkara nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nke cell stem. Ozugbo vegetative diatom ruru opekempe nha, mmeputakwa mmekọahụ na-amalite tupu meiosis. Nke a meiosis na-emepụta haploids na egwuregwu gba ọtọ ma ọ bụ enweghị eriri; gametes na-ejikọta na-etolite spores a na-akpọ spores helper.
Ihe ndị na-enye aka na-enye ohere ka diatom weghachi oke diploid na ụdị. Ha na-ekwekwa ka diatoms dị ndụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike. Ahịhịa ndị a na-esi ike nke ukwuu, ọ ga-etolite ma na-etolite shells nke ha mgbe ọnọdụ dị mma.
Ecology na ifuru
Mgbidi cell nke diatoms bara ụba na silica, nke a na-akpọkarị silica. Ya mere, uto ya na-ejedebe site na nnweta nke ogige a na gburugburu ya na-eto eto.
Dị ka m kwuru na mbụ, nkesa nke microalgae ndị a bụ n'ụwa nile. Ha na-adị n'ime mmiri dị ọhụrụ na nke oké osimiri, ọbụna na gburugburu ebe oke mmiri dị ntakịrị ma ọ bụ na-enwe oke iru mmiri.
N'ime mmiri, ha na-ebikarị na mpaghara pelagic (mmiri mepere emepe), ụfọdụ ụdị na-etolite obodo ma na-ebi n'ime ala benthic. A naghị edozi ọnụọgụ ọnụọgụ diatom n'ozuzu: ọnụọgụ ha na-adịgasị iche na oge ụfọdụ. Oge oge a metụtara nnweta nri yana dabere na ndị ọzọ ihe anụ ahụ na kemịkalụ dị ka pH, salinity, ifufe na ọkụ.
Mgbe ọnọdụ kachasị mma maka mmepe na uto nke diatoms, ihe a na-akpọ blooming ma ọ bụ blooming na-eme.
N'oge nkwalite, ndị mmadụ diatom nwere ike ịchịkwa nhazi obodo phytoplankton na ụfọdụ ụdị na-ekere òkè na ifuru algal na-emerụ ahụ ma ọ bụ tides na-acha uhie uhie.
Diatoms nwere ike imepụta ihe na-emerụ ahụ, gụnyere domoic acid. Nsi ndị a ga-agbakọta n'agbụ nri ma mechaa metụta ụmụ mmadụ. Nsi mmadụ nwere ike ịkpata nkụda mmụọ na nsogbu ncheta, na ọbụna coma ma ọ bụ ọbụna ọnwụ. Ekwenyere na e nwere ihe karịrị 100.000 ụdị diatoms n'etiti ndị dị ndụ (ihe karịrị ụdị 20.000) na mkpochapụ (ụfọdụ ndị edemede kwenyere na e nwere ihe karịrị ụdị 200.000). Ndị bi na ya na-atụnye ihe dịka 45% nke ngwaahịa mmiri mbụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara ọrụ diatom na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Diatoms